Taariikhda bilaabida OnePlus 6T ayaa lagu xaqiijiyay Yurub | Androidsis
Shalay waa la xaqiijiyay la OnePlus 6T taariikhda soo bandhigida. Dhamaadka dhamaadka calaamadda Shiinaha waa mid ka mid ah taleefannada la filayo xilligan dayrta. Moodelkan, shirkaddu waxay dooneysaa inay ilaaliso sanadkeeda wanaagsan, taas oo ay ku aragtay sida iibka moodelkiisii ​​hore uu si weyn kor ugu kacay. Kahor intaan la xaqiijin taariikhda soo bandhigideeda, waxaa jiray warar xan ah oo ku saabsan taariikhda ay sii deyn doonto.
Waxaa la isla qaatay in taleefanka la furi doono bilowga Nofeembar. Wax umuuqda inay ugu dambayntii sidan yihiin, in kasta oo imaatinka OnePlus 6T ee Yurub uu noqon doono taariikh ka duwan sidii la filayay.
Waxaa hore u xaqiijisay shirkadda lafteeda, Nofeembar 6, OnePlus 6T ayaa si rasmi ah looga bilaabi doonaa Yurub. Marka ma noqon doonto Nofeembar 1 sidii markii hore ay u soo shaac baxday. Dhowr maalmood ayaa ka duwan farqigii shalay subax.
Yurub ma noqon doonto meesha ugu horeysa ee loo socdo OnePlus 6T. Tan iyo ka hor intaan lagu soo saarin qaaraddii hore, taleefanka ayaa la filayaa inuu ka bilowdo Hindiya. Waxay noqon doontaa Nofeembar 2 marka si rasmi ah looga bilaabo India. Dalku wuxuu noqday mid kamid ah suuqyada ugu muhiimsan.
Sidaa darteed, sumadda Shiinaha waxay dooneysaa inay kordhiso joogitaankeeda dalkan. Sida qaybta dhamaadka sare ayaa sii kordheysa waxbadan sidoo kale. Marka Hindiya waxay noqon doontaa waddanka ugu horreeya adduunka ee ay suurtagal ka noqon doonto iibsashada OnePlus 6T. Markaas Yurub oo dhan ayaa raaci doonta.
Munaasabadda bandhigga waxaa la qabtaa Oktoobar 30 qalabka ee magaalada New York. Dhacdo shaki la'aan abuuri doonta farxad, iyo inay suurtagal noqon doonto in toos loogala socdo kanaalka YouTube ee sumadda Shiinaha. Markaan helno macluumaad ku saabsan bilawga taleefanka, waan kula soo socodsiin doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Taariikhda la bilaabayo ee OnePlus 6T ee Yurub hadda waa rasmi